I-XZ6600 HDD yesakhiwo yamkela i-chassis yokukhasa, indlu yokulawula iyafumaneka. Isebenzisa ukonga umbane inkqubo evaliweyo ngesanti kubunzulu baphantsi, mayixhotyiswe electro-ngesanti kubunzulu baphantsi ulawulo, kakuhle umthwalo uvakalelo ophezulu kunye patent XCMG kaThixo. Iinkcukacha eziphambili zobuchwephesha zifikelela kwinqanaba eliphezulu kumazwe aphesheya. Izinto eziphambili zenkqubo ye-hydraulic, ukuhanjiswa, inkqubo yombane kunye nebhokisi yebhokisi yenziwe ngeemveliso zeempawu zokuqala zehlabathi, ukusebenza kakuhle, ukuthembeka okuhle.
Iimpawu Ukungeniswa kweXZ6600 HDD
Inkqubo yokubonisa ye-1.Digital, ukubonakaliswa ngokuthe ngqo kweeparameter zokwakha eziphambili ezinje ngokujikeleza kwe-torque, amandla okutyhala, njl., Ukoyisa iziphene zeerigs zokomba zemveli ekufuneka ziguqulwe kusetyenziswa izilinganisi zoxinzelelo, kwaye ukusebenza kulula.
2.I-torque yentloko ejikelezayo yamandla, inkqubo yokukhuselwa kokucinezelwa kwamandla isebenzisa izivamvo ze-elektroniki, ezinokuphendula ngokukhawuleza, ubuntununtunu kunye nokuthembeka okuphezulu; I-torque yokujikeleza kunye ne-push-pull-force ingacwangciswa ngokuchanekileyo; amandla intloko edibanise edadayo ukukhusela ngokuthembekileyo intambo yombhobho wokugrumba nokuphucula ukubhola. Intonga yobomi.
Inkqubo yamandla ombini yamkela i-Volvo EFI injini. Injini enye inokuqala zonke iintshukumo zesithuthi siphela. Ukudityaniswa kwetekhnoloji yokulawula isantya esineenyawo ezininzi, ilungele uluhlu olubanzi lwejoloji kunye neendleko zokwakha eziphantsi.
4.Ukutyibilika kwesakhelo sokugrumba kuxhomekeke kukutyhala kunye nokutsalwa kwesilinda seoyile, kwaye uhlengahlengiso lwe-engile yokungena ilula, ilula kwaye ikhuselekile.
5.I-cylinder-clamping vise eqinisekisa ukubethelwa kombhobho othembekileyo kunye ne-torque enkulu yokuqinisa; I-vise idada kuyo yonke inkqubo, ekulungeleyo ukwenziwa kwenkqubo ye-casing.
Indibaniselwano ye-6.Multi-pump kunye netekhnoloji yolawulo lokuhamba kokuhamba, ukusetyenziswa kwamandla kweinjini ephezulu, ukonga umbane kunye nokonga amafutha.
1130/1850kW / r / min
Injini house Indlu yamandla） IVolvo
Injini （Mainframe） Cummins
Ukunciphisa iRotary Bonfiglioli
Push ukunciphisa Bonfiglioli
Umlayishi Crane XCMG
XZ6600 HDD ukuqala komatshini xa uhamba noluhlu lokupakisha, kubandakanya la maxwebhu alandelayo:
Egqithileyo XZ3600 Tye Directional Drig Rig
umatshini wokugrumba i-hdd, Umatshini wokugrumba amaqula, I-hdd rig, Horizontal Directional Ukubhola Rig,